MTN Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha MTN Forex Tusiyaha
MTN Forex Tusiyaha
MTN Forex Tusiyaha waa qalab ganacsi-maalin intra. Waqti bay ku qaadanaysaa tilmaanta in la siiyo calaamadaha ay xitaa haddii ay ku siin karaan dhowr calaamadaha maalin.
Tilmaamahan aan ku xaddidnayn loo isticmaalo nooc oo lacagta qaarkood. Waxaa loo soo saaray isticmaalka dhammaan lammaanaha lacagta. tilmaame MTN ayaa sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa on mid ka mid ah markii ugu hindisaa sida ganacsatada sida. Doorashada cayiman ayaa waxay ku xirnaan doontaa tirada jeer in ka ganacsada waa diyaar si ay u fuliyaan iyo faa'iidada ah in ganacsade la beegsanayo. Haddii ganacsade ah, tusaale ahaan doorto inuu isticmaalo waqti go'an oo dhagan sida M15 ee, isaga ama iyadu waxay heli doonaan calaamadaha ganacsiga ka badan marka loo eego haddii uu dooran lahaa in la isticmaalo ganacsiga wakhti H1 ah. Si kastaba ha ahaatee, ganacsade uu noqon doono Ganacsi muddo aad u gaaban tan iyo markii isagu ama iyadu heli doontaa muddo sidoo kale marar badan iyo qaar ka mid ah calaamadaha kuwa ay noqon doontaa soo horjeeda in kuwii hore.
tilmaame MTN ayaa la soo bandhigay shaxda hoos ku gaar ah shaxda ugu weyn ee ganacsiga. tilmaame soo bandhigayaa ulood oo cagaar ah oo u dhigma la arrimuhu pre-xisaabiyaa of ul laambad kasta ama bar manidu shaxda ugu weyn ee ganacsiga. The baararka cagaaran waxaa markaas beehsa foomka la ruxruxo in daabka ku saabsan line a eber at dhexe. Waxaa jira dhibco cas iyo buluug in ay u sameeyaan on qataarrada shaxda tilmaame. dhibco Kuwani waa calaamadaha ganacsiga ah.
lagugu tuday sawirka.1. tilmaame MTN The geliyo on EUR / shaxda USD ah.
qiyaasta toosan ee shaxda tilmaame ee uu leeyahay shan heer oo ay ka mid -35,-12, 0, 12 iyo 35. The 12 iyo -12 heerarka ugu isticmaalo ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee waxaad bedeli kartaa heerarka ee suuqa kala ahaanayta tilmaame waa inaad sidaas oo dooni. Waxa kale oo aad ku dari kartaa sharaxaada qaar ka mid ah heerarka si ay u fududaan doonta in aad ku isticmaasho inta aad ganacsi. Si kastaba ha ahaatee, xitaa haddii aad go'aansato in aad beddesho ama bedeli heerarka, waa inaad ka fakartaa gelinaya heerka hoos ku 12 oo kor ku xusan -12 heerarka.
Fig.2. Heerarka iyo midabka ah heerarka ayaa changed.also jiro sharaxaad qaar ka mid ah ku daray on heerarka.
Sida loo isticmaalo tilmaame MTN in ay ku ganacsan.
Marka Ganacsi isticmaalayo Tilmaame MTN ah, ganacsade ah waa in had iyo jeer raadiyaan formation of dhibco ku taal shaxda tilmaame ee. Markaas ganacsade ah waa in ay sugaan bilowga formation of laambadda soo socda in shaxda ugu weyn ee ganacsiga isaga ama iyada ku meel ganacsi. dhibic guduudan waa signal iibiso halka dhibic ee buluuga ah waa signal iibsato. ganacsade ah waa in aan sugaa signal ah soo horjeeda in apper si isaga ama iyada la xiro karaa amarka laakiin waa in ay xirto si mar la ruxruxo gudbo heer eber si ay nabad iyo mar walba faa'iido.
Furitaanka booska iibiyay a.
Waayo, ganacsade ah in meel si iibiyay a, ruxruxo ee gudban shaxda tilmaame ee u leeyihiin in ay dhaafto ama ku saabsan -12 heerka iyo dhibic cas ayaa in la soo bandhigay. Sidaa darteed marka aad aragto in gudban ay u gudbeen -12 heerka, in ay diyaar u signal iibiyay iyo xirto si iibsan haddii aad ku Furi lahayn wax.
Furitaanka booska iibsan a.
Waayo, ganacsade ah in meel signal iibsan a, ruxruxo ee gudban shaxda tilmaanta leeyihiin in ay iskutallaabta 12 heerka kor u dhaqaaqin. Markaas sugi formation of dhibic ah buluug. Sidaa darteed ganacsade ah waa in la xiro si ay iibiso haddii uu jiro wax la furay waqti xaadirkaan.
Tusaalooyinka Xirfado furitaanka isticmaalayo Tilmaame MTN ah.
– Ganacsi iibiyey / USD ah.
– Ganacsi EUR / iibiyey ah.
MTN Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
MTN Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo MTN Forex Indicator.mq4?
Copy MTN Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Tusiyaha MTN Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar MTN Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousFxPro Forex Tusiyaha
Next articleCorona Forex Muujiyeyaasha